Ndị egwuregwu bọọlụ North America- Akụkọ nwata na akụkọ ifo
Home NORTH AMERICAN SOCCER
Onye ọ bụla Onye Ọkachamara North America nwere akụkọ nwata, nke metụtara oge ndị a na-agaghị echefu echefu bụ ihe ọchị ma na-emetụ n'ahụ. LifeBogger na-agwa gị ụlọ ahịa ndị a, yana Ezigbo akụkọ banyere Biography nke Ndị egwuregwu egwuregwu North America.
Kedu ihe kpatara Akụkọ nwata banyere ndị egwuregwu bọọlụ nke North America?
Na gburugburu 2016, anyị hụrụ ọdịiche ihe ọmụma na mkpokọta ụwa. Ọ bụ otu ihe metụtara enweghị ozi ahaziri ahazi gbasara ndị egwuregwu North America.
Iji meghee oghere a, LifeBogger guzobere Ngalaba Ugwu America, n'echiche nke ibugara Akụkọ hoodmụaka na Eziokwu Akụkọ ndụ nke ndị egwuregwu ya.
Ihe Ihe Odide Ugwu America anyi Kwuru
Edemede anyị gbasara ndị egwuregwu North America na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Isi ihe ndị a ga - eme ka ị nwee ike ijide ọdịnaya anyị nke ọma.
Nke mbu, anyi na ewetara gi akuko banyere umu aka ndi North America, site na mgbe amuru ha na ahuhu nke ndu ha.
Anyị na-ewetakwara gị ozi banyere usoro ezinụlọ na mmalite / mgbọrọgwụ ha. Ihe ozo etinyekwara bu ihe omuma banyere ndi nne na nna ha.
Nke ato, anyi na agwa gi ihe omumu banyere ndu mbu na ahuhu (ha nma ma obu ojo) nke butere omumu nke ndi football ha.
Akụkọ ahụ gara n'ihu na ahụmịhe (dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ) ahụ n'oge ọrụ ha.
Roadzọ Anyị Si Akụkọ amaala na-akọwa ihe ndị egwuregwu North America mere gabigara iji nụrụ ụtọ ihe ịga nke ọma.
Nrute anyị banyere akụkọ ama ama na-akọwa akụkọ banyere ha na-aga nke ọma na ọnọdụ ha nwere ugbu a.
Anyị na-aga n’ihu ime ka gị na ndụ Lovehụnanya ha, bụ nke ejedebeghị na ozi gbasara ụmụ nwanyị na nwunye ha.
Nke ozo bu eziokwu banyere ndu nke ndi egwuregwu nke ndi North America
Ndị otu anyị ga - eme ka ị mara ihe banyere ndụ ezinụlọ ha (mmekọrịta gị na ndị ezinụlọ na ndị ikwu).
Anyị na-aga n’ihu ikpughere Netwọlụ ha, Ego na Ndụ Ha.
N’ikpeazụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ Untold nke ị maghị na o nwere ndị egwuregwu North America.
Ka ọ dị ugbu a, anyị agbajikwa udi otu a na ngalaba ndị a. Chọta n'okpuru;
Gụ edemede nke ụdị a ga - eme ka ị mata ebumnuche anyị, nke bụ ijikọ oghere nke mere ka enweghị ozi zuru oke banyere ya. Akụkọ nwata na Eziokwu Akụkọ ndụ. LifeBogger kwenyere n'echiche ahụ bụ na ahụike ka ndị na-ege ntị lelee egwuregwu ahụ, yana ịgụ akụkọ banyere ndị egwuregwu ha na-akwado.
Ndị otu anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi na usoro anyị na-agbanwe oge nke iwepụta akụkọ. Obiọma Kpọtụrụ Anyị ọ bụrụ n’ịhụ ihe ọ bụla adịghị mma maka mbipụta ọ bụla.
Ugbu a na-enweghị nkwado ọzọ, ka anyị gosi gị ihe anyị nwere na udi otu a.
Editọ LifeBogger - Bọchị gbanwee: Eprel 24, 2020